Posted by Tranquillus | Jul 11, 2020 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Kheyraadka aadanaha iyo waxyaabaha loo baahan yahay aqoonta ayaa aad ugu kala duwan shirkad ilaa mid kale. Haddii baahiyahaas aan la buuxin, muddooyinka-gaaban ama muddada-dheer ee horumarka ayaa laga yaabaa inay ka dhex muuqdaan shirkadda dhexdeeda. Sidaa awgeed baahida loo qabo in la bilaabo tababar shaqo-waxbarasho ama xitaa dib-u-tababarid ah. Cusboonaysiinta dib-u-eegista ama dhiirrigelinta-barashada shaqada (Pro-A). Qalab kuu oggolaanaya inaad kor u qaaddo meheraddaada. Adiga ayay kugu jirtaa inaad sameyso dadaallo muujinaya rabitaankaaga tababarka. Fursad yar baa jirta in laguugu dooran doono fursad saafi ah.
Fahmida dib u soo kabashada ama kor u qaadida bedel ahaan
Waa hab lagu casriyeeyo xiriir kasta oo daciif ah ama lagu qabsado jagooyin muhiim ah howsha horumarinta ganacsiga. Si kale haddii loo dhigo, ganacsi kastaa waa inuu isu beddelaa si uu ula kulmo baahiyaha badan ee teknolojiyadda, suuqgeynta iyo macaamiisha.
Shirkad kastaa sidaas darteed waxay xiiseyneysaa u diyaarinta dhammaan shaqaalaheeda ujeedokan.
Dib-u-kobcinta ama dhiirrigelinta-daraasadda shaqada ayaa gacan ka geysata shirkad kasta sidii ay ula jaan qaadi lahayd qaybta wax soo saarkooda wixii caqabad ah. Dhinac, Pro-A waa aalad faa'iido u leh ganacsadaha raadinaya khibrad cusub.
Dhanka kale, waxay xaqiijineysaa xirfada shaqo ee shaqaalaha ka faa iideysanaya. Waxay suurtogal ka dhigeysaa in la sameeyo xirfad cusub iyada oo la eegayo mashruuca kala guurka xirfadeed. Shaqaaluhu waxay halkaas ka heli doonaan dib u eegis xirfad leh oo faa'iido u leh mustaqbalkooda iyo mustaqbalkooda xirfadeed.
Sidan oo kale, marka tababarka ama kal-fadhiyada beddelaadda la dhammaystiro, shaqaaluhu waxay helayaan dallacsiin bulsheed ama mid xirfadeed. Ujeeddada kama dambaysta ahna waa la gaadhay: in lagu guuleysto mashruuca horumarinta shirkadda dhexdeeda ah iyo in la kordhiyo wax soo saarkeeda muddada fog.
Waa kuwee astaamaha aqoonyahannada ah ee marin u hela dhiirrigelinta-shaqada barashada?
Musharaxa shaqaalaha waa inuu kujiraa qandaraaska CDI. Iyadoo la raacayo qodobka L. 5134-19 iyo raacida Xeerka Shaqada, kuwa saxeexay heshiiska hal isdhexgalka ama CUI ayaa waliba raaci kara tababarkan. Qofka shaqaalaha ah ee raba in lagu dalacsiiyo nidaamka Pro-A. Waa inuu leeyahay heer waxbarasho oo ka hooseeya shahaadada koowaad.
Shaqaalaha qayb ahaan shaqadiisa qabta kadib markii la ogolaaday maamulka wuxuu soo jeedin karaa musharaxnimadiisa ku bedelasho iyada oo lagu bedelay. Ciyaar fudud ama tababare xirfadle ah oo hoos imanaya qandaraas CDD ayaa waliba xaq u yeelan kara dalacsiintaan. Guud ahaan marka laga hadlayo, kuwani waa shaqaale leh shahaadooyin ka hooseeya heerka looga baahan yahay horumarinta teknolojiyada.
Sidaa darteed, maamulayaasha shirkaduhu waxay u oggolaanayaan iyaga oo adeegsanaya Pro-A. La qabsiga isbedelada ka dhaca shirkadda dhexdeeda. Dhamaadka ficilada tababarka, waxay helayaan heerar tayo sare. Tani waxay u oggolaaneysaa iyaga si ay u helaan dallacsiin ama boos aad looga kalsoonaan karo.
Waa maxay noocyada tababarka inta lagu jiro Pro-A?
Shaqaalaha loo xushay tababarkan waxay raaci doonaan koorsooyin xirfadeed iyo teknoloji ah oo ku saabasan aragti ahaan oo ay ku dhaqmi doonaan mar dambe Waxay kuxirantahay aqoonta loobaahanyahay, laylisyo ku hoosjira xaalado la taaban karo ayaa la fulin doonaa. Markaa, ardayda ku jirta qaab-dhismeedka 'Pro-A' waxay heli karaan kala-sooc ay ku heshiiyeen heshiiska wadajirka ah ee laanta.
Shaqaalahan ardayda ahi waxay ka faa iideystaan ​​shaqo barasho iyo fursado kale oo ay ugu tabarucaan farsamo ahaan ama hawlo gaar ah. Dhamaadka tababarka Pro-A, waxay ka faa iidaysan doonaan Qiimaynta khibrada la helay (VAE). Waxaa sidoo kale laga diiwaan gelin doonaa RNCP (Tusaha Qaranka ee Shahaadooyinka Aqoonta).
READ Sidee u shaqeeyaa fasaxa mushaharka leh?
Xaqiiqdii, laga bilaabo Agoosto 23, 2019 markii la dhaqan geliyo xukunka n ° 2019-861, qofku wuxuu ka faa'iideysan karaa aqoonsi xirfadeed oo uu ugu mahadcelinayo Pro-A. Tani waa u qalmid ka mid ah liistada rasmiga ah ee laanta xirfadleyda ah. Pro-A waa la horumarin karaa iyadoo ay ugu wacan tahay jiritaanka farsamooyin duugoobay iyo isbeddello waaweyn oo ku yimaada laanta xirfadleyda ah.
Sidee tababarka ku saleysan shaqada loo qabtaa?
Tababarka waa la qaban karaa saacadaha shaqada. Sidaas darteed qofka shaqaalaha ah mushaar ayaa bil walba la siiyaa. Shaqaale khibrad badan leh, oo uu magacaabay maamulaha meheraddu, wuxuu ciyaaraa doorka baraha sidaa darteedna wuxuu siiyaa tababar daraasad shaqo si tan loo sameeyo. Umeerin, oo qayb ka ah Pro-A, waxay socotaa inta udhaxeysa 6 bilood iyo 12 bilood (ama 150 saacadood uguyar).
Baruhu wuu soo dhaweyn doonaa oo hagi doonaa qofka shaqaalaha ah inta uu tababarka ku jiro. Waxay ku xiran tahay barahan inuu qorsheeyo jadwalkiisa iyo waxqabadkiisa si loo baro dhammaan farsamooyinka la doonayo. Isla macallinkan ayaa ka qayb qaadan doona heerka ugu dambeeya ee dabagalka tababarka: qiimayntiisa.
Pro-A wuxuu dhici karaa saacadaha shaqada ka baxsan. Kaalmada tababarka ma heli doono ka-faa'iideystaha kiiskan. Saacadaha shaqadu waxay noqon karaan kuwo gebi ahaanba ama qayb ahaan loo qoondeeyo kal-fadhiyada tababarka. Loo shaqeeyaha iyo qofka shaqaalaha ah ee ay khusayso waa inay go'aan ka gaadhaan, ka dib marka la qoro heshiiska heshiiska daryeelka shaqaalaha tababartaha.
Inta lagu jiro muddadan, heshiiska shaqaalaynta shaqaalaha waxaa ku jiri doona wax ka beddel. Si kastaba ha noqotee, wuxuu sii wadaa inuu ku raaxeysto dhammaan faa'iidooyinka ku xiran Lambarka Bulshada ama shirkadda ceymiska caafimaadka ee dhameystirka ah. Tusaale ahaan, waxaa suuragal ah inuu helo magdhaw iyo taageero haddii uu jiro jirro.
READ Sida saacadaha dheeraadka ahi u shaqeeyo
Aaway maalgalinta “Pro-A”?
Qaadashada tababar-shaqo barasho micnaheedu waa aqbalaada meelayn xirfadeed. Shaqaalaha marin u leh tababar ku xiran shaqada looma baahna inay bixiyaan wax uun. Waa halkii Hawl wadeenka kartida (OPCO) ama shirkadda (ku siisay inaad haysato adeeg tababar) oo maalgeliya wax walba.
Tani waa sicir fidsan oo daboolaya kharashaadka tababarka, hoyga iyo gaadiidka ee shaqaalaha daraasadda shaqada. Qiimaha sagxadda ah ee laga hadlayo waa 9,15 euro saacaddii saacad ahaan marka loo eego go'aanka. Si kastaba ha noqotee, laanta mas'uulka ka ah tababarka waxay bixin kartaa magdhow wanaagsan.
Mushaharka shaqaalaha tababarka ku jira waxaa damaanad qaadi kara Hawlwadeenka karti-xirfadeedka haddii waaxda bilaabaya xirfad-yaqaanku ay horay u sii qorsheeyeen. Xiriiriyaha ayaa waliba bixin kara dhammaan adeegyada macallinka shirkadda.
Wuxuu laqaban karaa kharashaadka laxiriira jimicsiga adeegga waxbarista had iyo jeer gudaha qaab dhismeedka Pro-A. Waa qayb ka mid ah lacagaha loo qoondeeyay tababarka 'Pro-A' oo ay ku xukumaan maareynta shirkad ay wadaagaan taasoo suurtagal ka dhigaysa in lagu abaalmariyo shaqaalahan kale ee beddelaya iyo tababaradan loo magacaabay inay fuliyaan dib-u-soo-nooleynta ama Pro-A. Tani waa fursad aan la lumin.
Cusboonaysiinta dib-u-soo-celinta ama dhiirrigelinta-daraasadda shaqada (Pro-A). July 8th, 2020Tranquillus
horeQorshaha Horumarinta Xirfadaha: Tillaabooyinka Tababarka Loo-shaqeeyaha loogu talagalay Shaqaalaheeda.
socdaKoontada Tababarka Shaqsiyeed (CPF)